Fandrarana ny Vishwaroopam : Fanitsakitsahana ny Fahalalaham-Pitenenana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Marsa 2013 19:25 GMT
Vishwaroopam, sarimihetsika andaniana volabe ao Bollywood notantanina sy niaraha-tontosaina tamin'i Kamal Haasan, no nameno ny lohateny lehibe tamin'ireo gazety na dia talohan'ny nivoahany aza – saingy amin'ny endrika ratsy rehetra. Nisy disadisa tamin'ny antoko politika Haindò Makkal Katchi ity tantara ity ny volana jona 2012 teo, noho ny fitakian'ny antoko haindò hanovàna ny lohateniny.
Niteraka tsikera sy fandrahonana avy amin'ny tompon'ny efitrano fijerena sarimihetsika ny famoahana nataon'i Kamal Haasan, sy ny famoahana miaraka ny horonantsarimihetsika DTH ((Direct to Home, tamin'ny fandefasana azy tamin'ny fahitalavitra) sy ny efitra fijerena sarimihetsika. Na dia izany aza, ny ankamaroan'ireo tsikera dia avy amin'ny fikambanana Islamika tahaka ny Tamil Nadu Muslim Munnetra Kazagham (TMMK), izay naneho ny ahiahiany noho ny fomba fanehoana ny fikambanana miozolomana tao anatin'ny sarimihetsika.
Afisin'ny Vishwaroopam. Sary fahatsaram-po Wikipedia
Ny 23 Janoary 2013 no nisian'ny trangan'olana farany, rehefa noraran'ny governemanta Tamil Nadu nandritra ny 15 andro ny famoahana ity tantara Vishwaroompam ity eny amin'ny fijerena sarimihetsika. Nanambara ny antony nanaovany izany ny governemanta mba hisorohana ny mety firotahan'ny vahoaka. Feno herinandro mialoha ny fivoahany amin'ny fiteny tamola, 25 Janoary 2013, ny famandriha-toerana. Nanamarina izany fandraràna izany moa ny praiministra Tamik Nadu Jayalalithaa.
Nanameloka ny fidiran'ny [olona] politika tamin'ny sarimihetsika novokariny i Kamal Haasan tamin'ny filazana fa tsy olana amin'ny Silamo misaina na voataiza tsara io tantara io. Nitondra ny raharaha teo anivon'ny Fitsarana Ambony ao Madras i Haasan, mitaky ny fanafoanana faran'izay haingana izany fandraran'ny governemanta izany. Nesorin'ny fitsarana ao Madras le 29 janoary 2013 moa izany fandrarana izany ao Tamil Nadu, ka narahana fandefasana manokana, ary nohamafisina ny 30 Janoary ny fanesorana ny fandrarana. Nanohana an'i Haasan ny tontolon'ny sarimihetsika indiana, ary manameloka ny fandrarana ho toy ny fanitsakitsahana ny fahalalahana haneho hevitra.
Efa mihevitra ny handrara ny fandefasana ny “Vishwaroopam” ihany koa ankehitriny ny manam-pahefana ao Malezia sy Sri Lanka
Ankoatra ny Tamil Nadu, dia nivoaka any India sy tany ivelany ihany koa ny tantara amin'ny fiteny tamola ny 25 Janoay 2013. Nivoaka ny voalohany febroary 2013 kosa Vishwaroopam amin'ny fiteny hindia
Ireto misy karazana fihetsem-po kely tao amin'ny Twitter:
manishbytes: …Mfanditra ny fitondram-panjakana afovoany sy TN. Fa miaro ny zoko hijery ny sarimihetsika ve ny iray amin'izy ireo ?
akashtaker001: RT @shekharkapur: Nandefa hafatra mampatahotra ho an'ny mpanatontosa sarimihetsika ny Visharoopam. Aza mikitika mihitsy izay mety hahasarotiny eo amin'ny lafiny politika, kolontsaina, fiaraha-monina na fivavahana.
rotalks: @mymalishka Inona daholo ny mampifanditra amin'ny Visharoopam ? Tsy misy zavatra ratsy ao amin'ny tantara, raha tsy hoe mpampihorohoro angaha IANAO . Manoràta e
Zara_Ahmad: Ma demande à tous ceux qui regardent #Vishwaroopam… profitez-en. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'une fiction et prenez-la comme telle. Ny fangatahako amin'izay rehetra mijery ny #Vishwaroopam… araraoty. Aza adino anefa fa tantara foronin'ny saina io ka raiso araka izay.
dharatriv3di: RT @OQSpot: Tokony halalaka ny zava-kanto. Ny famoronana tsy voafehy. Tohano #Vishwaroopam & Kamal Haasan. Mpanatalenta tsy manampaharoa izy. Mila mahita an'io izao tontolo izao
dhina225: RT @prakashraaj: Tokony hanohana ny vishwaroopam ireo mpilalao sarimihetsika sy mpanatontosa eo amin'ny tontolon'ny sarimihetsika. mihalehibe ny hetsika. Andrasantsika miaraka ny fitsarana.
Nanipika kosa ilay bilaogera Farzana Versey ao amin'ny Cross Connections fa manambara ny fihetsiky ny olona vitsivitsy an-tsisi-kianja ity tranga miteraka resa-be ity (izay afa-nanetsika ny vahoaka sy ireo mpanohana amin'ny foto-keviny)
Ny tena fahadisoan'ireo olona dia ny manome rariny an-dry zareo olona vitsy kely. Raha any amin'ny fitsarana ny raharaha, ahoana no fomba hitenenan'ny media ? Afa-manao valan-dresaka ve ny mpanatontosa sarimihetsika?
Manontany mikasika ilay fanambaran'i Kamal Haasan milaza handao ny fireneny ilay bilaogera vehivavy iray :
Mikasika ny hoe handao ny fireneny ny firenena hialokaloka, izany mihitsy ny finoan'ireo tena vitsy kely. Mampiasa kendaroroka am-pihetsehampo. Tsy manaiky ny laisite ihany koa ireo.
Ny bilaogy Center Right India milaza hoe:
Ny tena manafintohina, dia ireo fandrahonana somary miolaka atao amin'i Kamal sy ireo horonantsariny nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety, sy ireo daroka avy eny an-dalambe. Araka ny nolazaiko tao amin'ny lahatsoratro farany, tsy mankasitraka aho ary tsy manaiky ny fomba fijery ara-politikan'i Kamal, izay hitako maharikoriko ahy aza ny sasany. Fa ny tena zava-dehibe, dia ny tsy ahafahan'ireo mpanetsika bontolo sy lany daty andro mahazo alalana handidy izay azontsika jerena na tsia amin'ny alalan'ny fandrahonana. Na inona na inona eritreretintsika mikasika an'i Kamal sy ny horonantsariny, tsy tokony handidy antsika ambiny ny ilay fanetsiketsehana